ရီးယဲလ်ဟာ သင့်တော်မယ့် နည်းပြတစ်ဦးကို အချိန်ယူစဉ်းစားပြီးမှ ခန့်အပ်သွားမှာပါ
နည်းပြသစ်ကို အလောတကြီး ခန့်အပ်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့ ရီးယဲလ်
2 Jun 2018 . 9:51 PM
ရီးယဲလ်အသင်းဟာ နည်းပြဇီဒန်း Zidane ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နည်းပြသစ်တစ်ဦး ခန့်အပ်ဖို့ ရှာဖွေနေပေမယ့်လည်း အလောတကြီး ခန့်အပ်သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ အချိန်ယူ ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဒန်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရယူပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ ရာထူးက ရုတ်တရက် နုတ်ထွက်သွားတာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ကစားသမားတွေ၊ တာဝန်ရှိတွေသာမက ပရိသတ်တွေအတွက်ပါ အံ့အားသင့် စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့လည်း ဇီဒန်းနေရာကို အစားထိုးဖို့အတွက် Plan B မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ ဇီဒန်းက ရာထူးက နုတ်ထွက်ခဲ့တာကြောင့် အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်။
အခုလောလောဆယ် ရီးယဲလ်နည်းပြသစ်အတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ နာမည်ကျော် နည်းပြတွေရှိနေပြီး စပါး အသင်းနည်းပြ ပိုချက်တီနို Pochettino က ထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေ ကတော့ ပိုချက်တီနိုထက် လီဗာပူးလ်နည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ကို ပိုကြိုက်နှစ်သက်နေပြီး နည်းပြသစ်ခန့်အပ်စေဖို့ ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်းထွက်နေတယ်။ ရီးယဲလ်နည်းပြသစ် အဖြစ် ရေပန်းစားသူတွေထဲမှာ ဂျာမနီအသင်းနည်းပြ ဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low ၊ အာဆင်နယ် အသင်းနည်းပြဟောင်း အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger တို့လည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းနည်းပြ ရာထူးက ဖိအားတွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နှက်နေတာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့လည်း အဲဒီရာထူး အတွက် သင့်တော်မယ့် နည်းပြတစ်ဦးကို အချိန်ယူစဉ်းစားပြီးမှ ခန့်အပ်သွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေတာပါ။
နညျးပွသဈကို အလောတကွီး ခနျ့အပျသှားမှာ မဟုတျတဲ့ ရီးယဲလျ
ရီးယဲလျအသငျးဟာ နညျးပွဇီဒနျး Zidane ရာထူးက နုတျထှကျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျပိုငျး နညျးပွသဈတဈဦး ခနျ့အပျဖို့ ရှာဖှနေပေမေယျ့လညျး အလောတကွီး ခနျ့အပျသှားမှာ မဟုတျဘဲ အခြိနျယူ ပွငျဆငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဇီဒနျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျဖလားရယူပွီး ရကျပိုငျးအကွာမှာပဲ ရာထူးက ရုတျတရကျ နုတျထှကျသှားတာဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက ကစားသမားတှေ၊ တာဝနျရှိတှသောမက ပရိသတျတှအေတှကျပါ အံ့အားသငျ့ စရာဖွဈခဲ့ရတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့လညျး ဇီဒနျးနရောကို အစားထိုးဖို့အတှကျ Plan B မရှိသေးတဲ့ အခြိနျမှာ ဇီဒနျးက ရာထူးက နုတျထှကျခဲ့တာကွောငျ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေတယျ။
အခုလောလောဆယျ ရီးယဲလျနညျးပွသဈအတှကျ ရပေနျးစားနတေဲ့ နာမညျကြျော နညျးပွတှရှေိနပွေီး စပါး အသငျးနညျးပွ ပိုခကျြတီနို Pochettino က ထိပျဆုံးမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရီးယဲလျပရိသတျတှေ ကတော့ ပိုခကျြတီနိုထကျ လီဗာပူးလျနညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ကို ပိုကွိုကျနှဈသကျနပွေီး နညျးပွသဈခနျ့အပျစဖေို့ ဆန်ဒရှိနတေယျလို့လညျး သတငျးထှကျနတေယျ။ ရီးယဲလျနညျးပွသဈ အဖွဈ ရပေနျးစားသူတှထေဲမှာ ဂြာမနီအသငျးနညျးပွ ဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low ၊ အာဆငျနယျ အသငျးနညျးပွဟောငျး အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger တို့လညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးနညျးပွ ရာထူးက ဖိအားတှေ၊ စိနျချေါမှုတှေ ပွညျ့နှကျနတောကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့လညျး အဲဒီရာထူး အတှကျ သငျ့တျောမယျ့ နညျးပွတဈဦးကို အခြိနျယူစဉျးစားပွီးမှ ခနျ့အပျသှားဖို့ ဆန်ဒရှိနတောပါ။
by Ko Kyue .6mins ago